Global Voices teny Malagasy » Tetikasan-tSary Mandrakitra Ny Fiainana Any Nepal Taorian’ny Horohorontany · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Jolay 2015 12:36 GMT 1	 · Mpanoratra Sanjib Chaudhary Nandika Nancy
Sokajy: Azia Atsimo, Nepal, Mediam-bahoaka, Saripika, Voina
Daty iray tsy ho adinontsika, voasoratra eo amin'ny rindrina iray any Pokhara. Tsy nikitika an'i Pokhara ny horohorontany, saingy nisy fiantraikany niseho tamin'ny endrika fanafoanana ireo famandrihan-toerana sy efitrano fandraisam-bahiny babangoana ny akon'izany. Sary an'i @paavan11 tao amin'ny Nepal Photo Project (Tetikasa Fakan-tsary an'i Nepal). Fampiasàna nahazoana alàlana
Horohorontany telo goavana no nandrava an'i Nepal tanatin'ny volana vitsy lasa. Olona 8.000 mahery no maty, avo roa henin'izay no naratra, roa tapitrisa no nafindra toerana, ary vinavinaina ho 8 tapitrisa ny isan'ireo trà-pahavoazana tamin'izany. (Raha mila fanampim-baovao, jereo ny pejy fandrakofana manokana  ataon'ny Global Voices). Ny asan'ny Nepal Photo Project dia ny maka an-tsary ity loza voajanahary voarakitra anaty tantara ity.
Ekipan'olona folo mpaka sary avy ao Kathmandu sy ny manodidina io tetikasa io, izay tarihan'ilay mpaka sary Sumit Dayal sy ilay mpanoratra Tara Bedi, izay nanangana  io hetsika io fotoana fohy taorian'ilay horohorontany tamin'ny 25 Aprily. Hatreto, maherin'ny 61.400 ireo mpanaraka izany ao amin'ny Instagram  ary maherin'ny 7.600 kosa ny ao amin'ny Facebook .
Ampiasain'ireo mpaka sary mandray anjara amin'izany ireo sary avy any amin'ny vahoaka hamerenana indray ny tantaran'ny fiainana taorian'ireo horohorontany: ny faharavàna, ny asa famonjena, ny fanampiana, ny fanorenana indray ary ireo tsirim-panantenana ny amin'ny hoavy.
Ny fahatsoran'io tetikasa io no antony voalohany mampitombo ny lazany: manisy tenifototra fotsiny amin'ny sariny ireo mpandray anjara, izay manoratra hoe #nepalphotoproject, ary manisy fanazavana fohy mikasika ny toe-javatra niseho nakàna ilay sary sy ireo mpandray anjara ao anatiny. Tian'ireo mpikarakara hijanona ho mora ampiasaina sy mijanona ho amin'ny anaran'ny tsirairay manokana  izany. 
Mampiseho ny fomba fiverenan'ny fiainana amin'ny laoniny tany Nepal sy ny fanarenana ataon'ny vahoaka ireo lahatsoratra farany navoakan'ity tetikasa ity.
Manju Gurung io. Isaky ny manandrana haka sary azy aho, dia toran'ny hehy izy ary mandositra. Miara-mipetraka amin'ny fianakaviana roa hafa ao an-tranon'akoho izy sy ny fianakaviany hatramin'ny 25 Aprily. Soa fa mba eo ny sekoly ho azy ary faly izy miaraka amin'ny namany. Nolazainy tamiko fa tsy mianatra ry zareo, milalao fotsiny no andaniany ny androny. Antenainy fa hanomboka amin'ny herinandro ho avy io ny fianarana ara-dalàna. Sary avy amin'i @sachindrarajbansi tao amin'ny Nepal Photo Project. Nahazoana alàlana
Sikrighyang, Nepal. Maka fanazavàna momba ny halavan'ny hazo ilaina amin'ny fanamboarana ny tranony amin'i Bilong i Mann Bahadur. Bilong, 31 taona, avy any India ary efa fito taona nanorenana trano amin'ny bararata be. Mifankahazo tsara izy ireo na dia tsy mitovy fiteny aza miaraka manangana ny tranon'i Mann Bahadur izay ravan'ny horohorontany. Sary avy amin'i @ujwalgarg0412 avy tao amin'ny Nepal Photo Project. Nahazoana alàlana
Amin'izao fotoana izao, nilamina ny ihany ny tany 46 andro aty aorian'ilay hovitra tsy niato. Androany tamin'ny 2 ora maraina, nihovitrovitra ny tany ary 4.1 ny vaikany rehefa niato 2 andro. Manomboka miaina amin'ny fiainany isan'andro ny olona. Matory am-pilaminana, maty jiro amin'ny alina. Miverina ny fifamoivoizana. Miverina amin'ny fiainany isanandro i Kathmandu. Sary avy amin'i @saagarchhetri tao amin'ny Nepal Photo Project. Nahazoana alàlana
Tsiahy ao anaty korontam-bato – tamin'ny fotoana nandehanako teny amin'ny làlan'i Sankhu feno korontam-bato no nahitako ity sary ity. Rehefa jerena akaiky dia olona nitanina andro no hitako. Izany no zavatra hita sy fahazaran'ny mponina any an-toerana na aiza na aiza manerana ilay tanàn-dehibe ambanivohitra. Azo antoka fa tsiahy ny fahiny ilay sary raha ny fahitàna ireto korontam-bato manodidina ireto amin'izao fotoana izao. Sary avy amin'i @sachindrarajbansi tao amin'ny Nepal Photo Project. Nahazoana alàlana
Ireo mpianatra ao amin'ny sekoly Dibya Jyoti any Bungamati ao anaty efitra vonjimaika nataon'ny ekipan'ny KUArt ‪#‎RebuildingBungamati‬. Mbola mianatra any anatin'ny trano fianarana tranainy ny sasany ary mikarakara fialofana misimisy kokoa eny akaiky eny ny ekipa.
Nisokatra tamin'ny herinandro teo indray ny ankamaroan'ireo sekoly any Nepal taorian'ilay horohorontany nampidi-doza tamin'ny Aprily. Hatramin'izay dia maro ireo trano fianarana no tsy azo antoka, an-kalamanjana sy any amin'ny toerana hafa no anaovana ny fampianarana, eny fa na dia ao anaty trano atahorana aza. Sary avy amin'i @kishorksg tao amin'ny Nepal Photo Project. Nahazoana alàlana
Ohatra ny hoe nalaina avy tamin'ny horonantsarin'i Steven Speilberg, hitako ity zazalahy ity nanosika ilay kilalao namboariny tamin'ny hazo kely lavalava sy kodiarana metaly anankiroa nalaina teo amin'ireo sisa sy korontam-bato izay tranon'ny mpifanolo-bodirindrina taloha. Nijery azy nanosika ilay kilalaony teny amin'ireo trano rava sy ny vato aho. Sary avy amin'i @kevinkuster tao amin'ny Nepal Photo Project. Nahazoana alàlana.
Be dia be no maty tamin'ny andaniny sy ny ankilany nandritra ny ady teo amin'i Nepal sy Tibet teo anelanelan'ny 1855 sy 1856. Niverina tamin'ny tanànany ireo miaramilan'i Haibung taorian'ny ady ary namboly ity hazo ity ho fahatsiarovana ireo mpiady lavo sy hamelàna ny helony noho ny namonoany ireo olona an'arivony mitovy aminy. Mbola mijoro ao amin'ny sisintanin'ny faritra n°1-n'ny tanànan'i Haibung ilay hazo. Sary avy amin'i @sachindrarajbansi. Nahazoana alàlana
Manamboatra #‎dharahara‬ kely ao #‎sahidgate‬. Lehilahy roa manangana dharahara kely ho fahatsiarovana ilay iray nianjera. Nazeran'ilay horohorontany tamin'ny 25 Aprily ilay dharahara manan-tantara. Sary avy amin'i @inspiredmonster tao amin'ny Nepal Photo Project. Nahazoana alàlana
Sulochana Maharjan, 16 taona, manenona kofehy amin'ny volonondry any Chapagaon, Nepal. Tamin'ny fotoana izay natoriany sy ny fianakaviany tao anaty trano lay teo akaikin'ny tranony, tsy nahazo antoka hoe tsy ho rava ny tranony taorian'ilay horohorontany. Mitohy hatrany ny fiainana eo anivon'ny korontana sy ny alahelo. Sary avy amin'i @eliegardner tao amin'ny Nepal Photo Project. Nahazoana alàlana
Miasa amin'ny fomba rehetra hanarenana ny fireneny ny Nepale. Ary mampiasa ny talentany ireo mpanakanto ho fanentanana sy hanangonam-bola. Ireto misy mpanakanto mpikambana ao amin'ny vondrona samihafa antsoina hoe Art Lab izay any Kathmandu. Ny rindrina eny an-dàlambe no ampiasainy handefasana hafatry ny fanantenana, ny fandriampahalemana, ny fiaraha-miory ary ny fahavitrihana. Ezaka ataony ihany koa izany mba hampiasàna ny kanto ho fitsaboana ireo rehetra voadona taorian'ilay horohorontany. Sary avy amin'i @prach_is_here tao amin'ny Nepal Photo Project. Nahazoana alàlana
Niverina indray ny fianarana tany ‪#‎Nepal‬ tamin'ity harinandro ity taorian'ny horohorontany #‎NepalQuake ny 25 Aprily‬. Tamin'ity indray mandeha ity, dia ambany alokaloky ny hazo banyan any Salyantar, akaikin'i Gorkha. Sary avy amin'i @mikaness tao amin'ny Nepal Photo Project. Nahazoana alàlana
Mampianatra fiarovantena an'ireo vehivavy sy ny ankizy any amin'ny tobin'i Kathmandu miaraka amin'ny ekipany i Pramila Khadka, mpitandro filaminana sady mpilalao ‘judo’. Tsy tahaka ny mipetraka any an-trano ny mipetraka amin'ny toby, misy olon-kafa marobe manodidina antsika. Fa amin'izao fotoana izao raha misy bandy manao fihetsika mahery amiko, mahazo ny anjarany izy,” hoy ny mpandray anjara iray tamiko. Ankasitrahana ny mpitandro filaminana any Nepal ! Tia ny asany. Sary avy amin'i @paavan11 tao amin'ny Nepal Photo Project
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/07/20/71774/
 pejy fandrakofana manokana : https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/nepal-earthquake/
 mora ampiasaina sy mijanona ho amin'ny anaran'ny tsirairay manokana: http://time.com/3851836/nepal-instagram-project/